Boqollaal Qof oo Cambaareynaya Meles Zenawi ooTaagan Afaafka Hore ee Xarunta Shirka London | Anti-Tribalism
← C/weli Gaas oo Si Cad u Taageeray in la Duqeeyo Koonfurta Soomaaliya iyo David Cameron oo Shaaciyey Heshiis
Gabagabada shirka London iyo War-murtiyeedka ka soo Baxay oo Qodobkisa 6aad oo Somaliland lagu xusay →
Boqollaal Qof oo Cambaareynaya Meles Zenawi ooTaagan Afaafka Hore ee Xarunta Shirka London
London – Boqollaal ruuxoo Soomaali ah ayaaillaa haatan bannaanbax ka hordhigaya xarunta uu ka dhacayo shirka London ee aqalka Lancaster House ee magaalada London.
Dadka dibadbaxaya ayaa waxaa ka mid ah kuwo ka horjeeda raysul wasaaraha Ethiopia Meles Zenawi oo hoolka shirka ku jira iyagoo ku cambaareynaya xasuuq uu ka geystay gobolka Soomaali Galbeed ee ay Ethiopia heysato.
Sidoo kale dadka bannaanbaxaya ayaa ka horjeeda qodobada shirka ka soo baxaya oo la sheegay inay khatargelinayaan qaranimada Soomaaliyeed.
Dadka dibadbaxaya ayaa dhooban afaafka hore ee aqalka Lancaster House iyadoo shirkuna weli socdo.
Raysul wasaaraha Ethiopia Senawi ayaa ka mid ah dadka maanta ka hadlaya arimaha Soomaaliya isagoo ka mid ah martida ay dawlada Ingiriiska ku martiqaaday shirweynaha London.
Waxaa lagu wadaa in galabta la soo gabagabeeyo iyadoo si rasmi ah loogu dhawaaqi doono qodobada go’aanka ah ee laga gaaray arimaha Soomaaliya oo labaatankii sano ee la soo dhaafay ku jiray dawlad la’aan.